Abavelisi bePowder abaNxibeleleyo abaLungileyo kunye nababoneleli | Banffee Makeup
Iimveliso zoBuso zoBuso
I-Highlighter kunye neBronzer
Amehlo Makeup Products
Imilebe Makeup Products
Iglosi yoMlebe engancamathelanga
Ekhaya > Iimveliso > Iimveliso zoBuso zoBuso > Umgubo ohlangeneyo
3 Imibala:UKUBULALAumgubo odibeneyo inemibala emi-3 ukusuka kwimibala enganzulwanga ukuya kwenzulu. Imibala emhlophe, enqunu, emnyama ilungele zonke iintlobo zolusu. Kulungileixesha elide compact powder iyathengiswa, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Umgubo:Yona's uhlobo olucolekileyo noluthambileyo lwematte lucinezelwe ngumgubo obambeneyo. Inokusebenza kakuhle kulawulo lweoli kunye nokungangeni kwamanzi. I-pigment ephezulu kakhulu, iya kugubungela ngokupheleleyo iziphene zobuso njengamaqhakuva, iipores, isiva esincinci, njalo njalo. Inemisebenzi efanayo kunye nesiseko kunye nomgubo wokumisa. Kulula ukwenza ubuso obungenasiphako.
Umqulu:I powder iqulethwe kwi-palette emnyama. Ngaphandle kwebhokisi yephepha elimnyama kunye nefilimu yeplastiki evaliwe ngobushushu.
Ubunzima: net ubunzima 10g, ubunzima gross 70g.
I-Banffee wholesale compact powder yokwenza izinto ezivela kumzi-mveliso waseBanffee
I-OLI YAMAHHALA, SHINE IPOWDER YOKUNCIPHISA: Ibonelela ngesiphelo esingenasiphako sosuku lonke kunye nolawulo lokukhanya. Lo mgubo we-oyile ongenawo i-noncomedogenic awuyi kuvala iipores
Eyona Nkampani yePowder eCiniweyo-iBanffee Makeup
I-OLI YAMAHHALA, SHINE IPOWDER YOKUNCIPHISA: Ibonelela ngesiphelo esingenasiphako sosuku lonke kunye nolawulo lokukhanya. Lo mgubo we-oyile ongenawo i-noncomedogenic awuyi kuvala iiporesI-MAKEUP ENGAPHAMBILI EMVA:Impahla yethu ye-16 yeyure ezinde iPowder ecinezelweyo ayinakuze ibe yikeyiki kwaye ayizukoma okanye iqhekeke.
Intro Banffee makeup compact powder ixabiso ifektri OEM ODM odolo
Iimpawu zalo mgubo ocolekileyo oxiniweyo:I-Pigment ePhakamileyo, i-Waterproof, ehlala ixesha elide, i-Fine Powder, i-oyile yokulawula, i-Concealer, i-Full coverage, i-Flawless, i-Matte, iMibala emininzi, i-Vegan, i-Organic, i-Cruelty Free, i-Non stimulative, i-Soft, i-Hamless, yeNdalo.Izinto zethu eziluncedo:1. Intengiso eshushu 5000 iipcs sithumela nyanga nganye kwimarike yehlabathi.2. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu.3. Umzi-mveliso weXabiso ofikelelekayo uthengisa ngokuthe ngqo.4. Isampulu Ifumaneka kwisitokhwe.5. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza malunga ne-7days.Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuze uodole! Enkosi!
Customized Banffee cosmetic icinezelwe umgubo logo yabucala ileyibhile ephantsi moq makeup ubuso abavelisi bepowder evela eTshayina
Umgubo odibeneyo uqulethwe yiphalethi engqukuva emnyama. Iqulethe isiponji esigqwesileyo ngaphakathi.Umgubo ulungile, ubhityile, ukhaphukhaphu. Yisilika egudileyo, ilungele zonke iintlobo zolusu. Kulula ukufihla imingxunya okanye obunye ubuso obungenasiphako ngokusebenzisa lo mgubo uphezulu we-pigment. Unokwenza ngokukhawuleza ukwakheka okuthambileyo kunye nendalo. Ngokungangeni kwamanzi, ubungqina bokubila, abalinganiswa bolawulo lweoyile, buyakugcina ubuso bakho buhlaziyekile imini yonke.Iimpawu zalo mgubo ocolekileyo oxiniweyo:I-Pigment ePhakamileyo, i-Waterproof, ehlala ixesha elide, i-Fine Powder, i-oyile yokulawula, i-Concealer, i-Full coverage, i-Flawless, i-Matte, iMibala emininzi, i-Vegan, i-Organic, i-Cruelty Free, i-Non stimulative, i-Soft, i-Hamless, yeNdalo.
I-OEM makeup powder powder egudileyo esisiseko esinemibala emi-3 isiseko soBuso esingangeni manzi
Intshayelelo yeBanffee engangeni manzi isiphene esincinci iSiseko esinelogo yobuso bePowder yesiko abasetyhini Isiseko somgubo weBanffee Makeup
Isiseko siqulethwe yibhotile yesikwere esineqabaka. Inomthamo omkhulu we-35ml kunye ne-wide range shades 10 imibala ukusuka kumhlophe ukuya kumnyama. Kulula ukubona imibala ngolwandlalo olucacileyo.Isiseko solwelo sinobuhle, ubuncinci, umgubo wokukhanya. Inokwenza lula iipores zobuso kunye namabala angabonakali. Yisilika egudileyo, ilungele zonke iintlobo zolusu. Unokwenza lula ukwakheka okuthambileyo kunye nendalo. Iqulethe izithako zendalo ukugcina ubuso bakho bunomsoco kwaye bufumile. Ngokungangeni kwamanzi, ubungqina bokubila, abalinganiswa bolawulo lweoyile, buyakugcina ubuso bakho buhlaziyekile imini yonke.Iimpawu zesi siseko:I-Pigment ePhakamileyo, i-Waterproof, ehlala ixesha elide, i-Fine Powder, i-oyile yokulawula, i-Concealer, i-Full coverage, i-Flawless, i-Matte, iMibala emininzi, i-Vegan, i-Organic, i-Cruelty Free, i-Non stimulative, i-Soft, i-Hamless, yeNdalo.
I-Banffee 2021 intengiso entsha eshushu icwecwe yomgubo kwisampulu yesitokhwe ekhoyo yokwakheka kwesiseko sobuso
Banffee Umgangatho ophezulu we-OEM comapct powder makeup yehoseyile yeleyibhile yabucala ecinezelweyo
I-Banffee Icinezele isiseko somgubo we-matte kunye nobuso obucinezelwe ngumgubo
I-2021 Ileyibhile yaBucala ecinezelwe ngumgubo we-Concealer iSiseko se-Makeup yeSiseko sePowder
Umgubo odibeneyo uqulethwe yiphalethi engqukuva emnyama. Iqulethe isiponji esigqwesileyo ngaphakathi.Umgubo ulungile, ubhityile, ukhaphukhaphu. Yisilika egudileyo, ilungele zonke iintlobo zolusu. Kulula ukufihla imingxunya okanye obunye ubuso obungenasiphako ngokusebenzisa lo mgubo uphezulu we-pigment. Unokwenza ngokukhawuleza ukwakheka okuthambileyo kunye nendalo. Ngokungangeni kwamanzi, ubungqina bokubila, abalinganiswa bolawulo lweoyile, buyakugcina ubuso bakho buhlaziyekile imini yonke.Iimpawu zolu mgubo ocolekileyo oxiniweyo:I-Pigment ePhakamileyo, i-Waterproof, ehlala ixesha elide, i-Fine Powder, i-oyile yokulawula, i-Concealer, i-Full Coverage, i-Flawless, i-Matte, iMibala emininzi, i-Vegan, i-Organic, i-Cruelty Free, i-Non stimulative, i-Soft, i-Hamless, yeNdalo.
I-Banffee organic vegan mineral icinezelwe ngumgubo inkohlakalo engenabungozi kwizithako zekhemikhali
Umgubo wobuso beBanffee kunye ne-funditon palette ubuso bokuhombisa